Muslimiinta Yurub ku nool badankoodu waxay la kulmeen cunsuriyadayn-Cilmibaaris | SAHAN ONLINE
Muslimiinta Yurub ku nool badankoodu waxay la kulmeen cunsuriyadayn-Cilmibaaris
LONDON:-Waraysiyo ay wakaalada xuquuqda aasaasiga ah ee Yurub ka qaaday10527 muslimiin ah oo ku nool 15 dal oo Yurub ahwaxay caddaysay in muslimiinta waraysiga laga qaaday 92% ay lugula dhaqmay cunsuriyad leh muuqaalo kala duwan.
53% muslimiinta Yurub ku nool waxaa lugu cunsuriyadeeyay magacyadooda islaamka ah awgood markay guryaha doonanayeen.
39% muslimiinta Yurub degan waxaa lugu cunsuriyadeeyey muuqaalkooda kore gaar ahaan markay shaqo raadiska yihiin. Dumarka ayaa ugu badnaa dadka muuqaalkooda kore lugu takooray, waxayna ahaayeen 35% dadka muuqaalkooda lugu takooray.
Diraasadaan oo socotey muddo 10 bilood ah waxay caddaysay in 94% dumarka xijaaban ay la kulmeen takoorid isugu jirta af iyo addin.
Dumarkaan xijaaban ee la waraystay 31% ka mid ah waxaa lugu sameeyay xadgudub af ah, halka 39% lugu sameeyey jilid xumayn ah, 22% na waxaa lugula hadlay ereyo colaadin iyo weerar ah. 2% ka mid ah dumarka xijaaban ee la waraystay ayaa lugula kacay xadgudub xagga jirka ah.
Diraasaduy waxay sheegtay in 23% ka mid ah dumarka la waraystay ee aan xijaabnayn ay la kulmeen takoorid.
Diraasadaan waxay xoogga saartay muslimiinta dalalkooda ka soo hayaamay iyo carruurtooda 16 sano ka weyn ee hal sano ama ka badan deganaa 15kaan dal ee Yurub ah: Hangari, Qubrus, Jarmal, Denmark, Giriig, Isbayn, Finland, faransiis, Talyaani, Malta, holland, Sweden, Slovenia iyo Ingiriis.
Colaaddaan ay beerayaan dalalka reer/galbeedku aad iyo aad bay kor ugu keceen 15kii sano ee ugu dambaysey, waxayna hadda ku socotaa heer ay dadkooda gaarsiiyaan inay cuqdad iyo nacayb la qarxaan, mana jiro wax dhaqdhaqaaq ah oo looga hortagayo colaaddaas ama loogu diyaargaroobayo oo ay dawladaha muslimiintu wadaan.
Iska daa in dawladaha muslimiintu ummadda cadow ka celyaane waxaa muuqata in ay qaateen fikrad ah kolley gaalada iskama dhicin kartaane muslimiinta la laaya; si ugu yaraan ay u badbaadaan qoysaska iyo xisbiyada xukunka haya oo qur ah!!.
Haddaba waxaa dadweynaha muslimiinta la gudboon inay ugu horrayn iyagu diintooda xoog u bartaan, kuna dhagaan; waayo waxa loo colaadinayo waa iyada darteed. Tan labaadna dadka ku sii qulqulaya ay joojiyaan hayaanka ay cadowgoodu isugu dhiibayaan. tan seddexaadna ay intii awooddooda ah ay ku dadaalaan inay dalalkooda wanaajiyaan; si ay uga kaaftoomaan dhibaatada Yurub uga sii horraysa.
Gabagabadii waxaan la hilmaami karin in ay Rabbigood baryaan, talosaartaan, kuna kalsoonaadaan, ayna yaqiinsadaan in aan dunidu sidaan sii ahaanayn ee xaqu adkaan doono. Ugu dambayna ay isu kaashadaan, Rabbigoodna la kaashadaan siday uga bixi lahaayeen dullinimada iyo daciifnimada maanta dunida guudkeeda ku haysata xilligay doonto haku qaadatee, nin walbana uu ka gaysto intii awooddiisa ah.
Sheekh Axmed Cabdisamad